EXO SUHO 김준면 - Myanmar - Download Facebook Videos - BajarFB.com
EXO SUHO 김준면 - Myanmar
Kim SUHO (김수호) Kim JunMyeon (김준면)
Date Of Birth : May 22,1991
FB URL: https://www.facebook.com/exosuhomyanmarfanpage/
​[[FMV]] ​ခေါင်း​လောင်း​လေး​တွေမြည်​​နေပြီ + တ​နေ့​နေ့​တော့ချစ်​၍လာလိမ့်​မည်​ - SUHO ver ~♡ ကဲ ​ခေါင်း​လောင်းမြည်​ပေးပါလို့ ​တောင်းဆိုထားတဲ့ သူ​တွေအတွက်​ ခါ​တော်​မီ ​ခေါင်း​လောင်း​လေးမြည်​​ပေးလိုက်​ပါပြီ​နော်​။😄 တစ်​​ခေတ်​တစ်​ခါက ​အောင်​မြင်​​ကျော်​ကြား လူကြိုက်​များခဲ့တဲ့ စာသားလှလှ​လေး​တွေနဲ့ ချစ်​ရသူအတွက်​ရည်​ရွယ်​ထားတဲ့ သီချင်း​လေးနှစ်​ပုဒ်​ဖြစ်​တဲ့ "​ခေါင်း​လောင်း​လေး​တွေမြည်​​နေပြီ" နဲ့ "တ​နေ့​နေ့​တော့ချစ်​၍လာလိမ့်​မည်​" ကို ​ပေါင်းစပ်​ပြီး Julia Noe က cover ပြန်​ဆိုထားတာမို့ လက်​တ​လောမှာ တအားကို​ရေပန်းစား​နေတဲ့ cover song ​လေးတစ်​ပုဒ်​ပါ။ Page မှာလည်း FMV ​လေး​တွေမတင်​​ပေးရတာ ကြာပြီမို့ ​"​ခေါင်း​လောင်း​လေး​တွေမြည်​​နေပြီ + တ​နေ့​နေ့​တော့ချစ်​၍လာလိမ့်​မည်​" SUHO ver ​လေးကိုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆 ​ခေါင်း​လောင်း​လေး​တွေမြည်​​နေတုန်း JunMyeon ​လေးနဲ့ပါ အိုစီကြည့်​လိုက်​ကြပါအုံး​နော်​~!!><😅
 KTO X EXO Korean History & Tradition - SUHO ~♡ ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ History & Tradition ကို မိတ်​ဆက်​​ပေးထားတဲ့ JunMyeon ​လေးပါ~ဘယ်​​လောက်​သန့်​ပြန့်​​နေလိုက်​သလဲ​နော်​~😭 Hanbok ​လေးနဲ့ကျ​တော့လည်း အရမ်းကိုသန့်​ပြီးချစ်​ဖို့​ကောင်း​နေတာ~♥ အံမယ်​ foreigners ​တွေကို ရိုးရာအစားအ​သောက်​​တွေနဲ့ ဧည့်​ခံ​နေ​သေးတာ။😙 ကိုရီးယားကို​ရောက်​ရင်​ hanbok ​လေးကိုဝတ်​ ရိုးရာအစားအ​သောက်​​လေး​တွေစား ကိုရီးယားရိုးရာအိမ်​​လေး​တွေရဲ့ ကြမ်းပြင်​မှာ သက်​​သောင့်​သက်​သာ အိပ်​စက်​တာ​တွေ လုပ်​ကိုလုပ်​သင့်​ပါတယ်​​နော်​။😉 Video အပြည့်​အစုံကို​တော့ ​အောက်​က link ​လေး​တွေမှာ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်​ရှုနိုင်​ပါတယ်​​နော်​။🙆 [ KTO X EXO TVC Korean History & Tradition ] - https://youtu.be/6xIrLNMn55A [ KTO X EXO TVC Korean History & Tradition (MAL) ] - https://youtu.be/sUrnE8th_uk [ KTO X EXO TVC Korean History & Tradition (JP) ] - https://youtu.be/hQWUYoItDPE [ KTO X EXO TVC Korean History & Tradition (VT) ] - youtu.be/9tGpbBH4Ttc [ KTO X EXO TVC Korean History & Tradition (THAI) ] - youtu.be/RhFNG1eyF3s [ KTO X EXO TVC Korean History & Tradition (ID) ] -youtu.be/SmlD22VEjK4
မရ​တော့ဘူး JunMyeon ​လေးရဲ့ ageyo မှာ ​လုံးဝကို ရူးခါသွားပါပြီလို့~!!!!😭 Chanyeollie ဦး​ဆောင်​ပြီး သူတို့ Leader ကြီးကို ageyo ​တွေလုပ်​ခိုင်း​တော့ ဟိုကလည်း လုပ်​ရှာပါတယ်​ မလုပ်​ခင်​​တော့ရှက်​​နေ​သေးတာ~!!😄 အာအီဂို ageyo ​​လေးက အရမ်းကိုချစ်​ဖို့​ကောင်းလွန်းလို့ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ​နော်​~!!😭 Vid Cr:Owner
ညီ​လေး​တွေစသမျှခံရရှာပါ​သော အစ်​ကိုကြီး JunMyeon ပါပဲ~!!😅 B.B.H ဆိုတာလည်း JunMyeon က ချစ်​လို့အလိုလိုက်​​တော့ သူ့အစ်​ကိုကိုဆို သိပ်​ကိုစ~!Park Chanyeol ဆိုတာလည်း JunMyeon ရဲ့ "The Man Who Laugh" musical က Gwynplaine character ကို​စချင်​​တော့ သူ့အစ်​ကိုကို ​နေ့တိုင်းလက်​နဲ့ပါးစပ်​ကိုဖြဲပြီးစ(အံမယ်​နှစ်​​ယောက်​သား ကတာလည်းအတိုင်​အ​ပေါက်​ညီသား😄)~!! ချစ်​ဖို့​ကောင်းလိုက်​တဲ့ ညီအစ်​ကို​တွေ ~!!!😙 Vid cr:Owners
[#RedVelvet #PowerUp Dance Catch Up] Scene #8 : SUHO~♡ အာအီဂို~!!!!RedVelvet ရဲ့ PowerUp ကို GirlsGeneration က Yoona ရယ်​ NCT က Taeyong ရယ်​နဲ့အတူ Seulgi သင်ေ​ပးတဲ့အတိုင်း ​လိုက်​က​နေတာ​လေး!!!! အလယ်​က​နေ အသည်းယားစရာ​တွေလုပ်​​နေတာသူက!!!အားလုံးထဲ အငယ်​ဆုံး​လေးကိုကြလို့!!>< #파도춤 #Wavy_Dance #소녀시대 @GirlsGeneration #EXO @weareoneEXO #NCT @NCTsmtown #윤아 #수호 #태용 #레드벨벳나왔잖아_파워업보러가자 #레드벨벳 #파도타고_가다_아기상어_만난_춤 #Wavy_Baby_Fin_Dance
လက်​ရှိ JunMyeon ပါဝင်​​ဖျော်​​ဖြေတင်​ဆက်​​နေတဲ့ "The Man Who Laugh" musical ရဲ့ video clip ​လေးပါ~♡ video ​လေးကို အချိန်​2မိနစ်​​ကျော်​​ကျော်​စာ​လေး​ပေးပြီးကြည့်​လိုက်​ရုံနဲ့တင်​ vocal ကအစ performance အဆုံး Musical Actor တစ်​​ယောက်​အဖြစ်​ လုံးဝအရည်​အ​သွေး​တွေပြည့်​ဝ​နေတဲ့ JunMyeon ရဲ့ပုံရိပ်​ကို​တွေ့မြင်​နိုင်​ပါတယ်​။💙 ​ဖျော်​​ဖြေတင်​ဆက်​​နေရတဲ့ ဇာတ်​ရုပ်​နဲ့ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ အံဝင်​ဂွင်​ကျဖြစ်​​နေသလဲဆို လုံးဝအခြားတစ်​​ယောက်​အလား ​ပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိပါပဲ~♥ Emk musical ဘက်​ကလည်း "The Man Who Laugh" musical ကို ဘယ်​​လောက်​ ရင်းနှီးမြုပ်​နှံထားလိုက်​သလဲဆို musical ရဲ့ ခမ်းနားမှုကိုကြည့်​ရင်​သိနိုင်​ပါတယ်​​နော်​။ Emk musical ရဲ့ အခမ်းအနားဆုံး​သော musical ​တွေထဲက တစ်​ခုဖြစ်​လာခဲ့တဲ့ "The Man Who Laugh" musical ပါပဲ။ ဒီလို musical မျိုးမှာ main character ​နေရာကပါဝင်​တင်​ဆက်​ခွင့်​ရတဲ့ JunMyeon အတွက်​လည်း သိပ်​ကိုဂုဏ်​ယူမိပါတယ်​~💕 တကယ်ပါ ​ဘယ်​အလုပ်​ကိုမဆို ပြီးပြည့်​စုံ​အောင်​ ​အံ့ဝင်​ဂွင်​ကျဖြစ်​​အောင်​ အ​သေအချာအာရုံစိုက်​ပြီး လုပ်​တတ်​တဲ့ Kim JunMyeon လို လူကို stan ရလို့လည်း ဂုဏ်​ယူလို့ကိုမဆုံး​တော့ပါဘူး!!😭 Full Video: youtu.be/sZKN4vGyBO8
"ဒီကျယ်ပြောလှတဲ့ စကြ၀ဠာကြီးထဲမှာ ကျနော်တို့ EXO နဲ့ EXO-L တွေ ဆုံတွေ့ကြတာ ရေစက်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား" ( 이 광활한 우주에 우리 엑소와 엑소엘이 만난건 운명이 아닐까 ) "တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလာရင်လည်း ထပ်ပြီး ဆုံတွေ့ကြရအောင်" (다시 태어나도 다시 만나자) ရိုးရှင်းလှတဲ့ စကားလေးတွေမှာ လေးနက်မှုတွေပါဝင်နေတဲ့ ElyXiOn [dot] In Seoul D-3 က JunMyeon ရဲ့ Ending ment က နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးပါ။♥ သူတို့နဲ့ကိုယ်တွေကြားက သံယောဇဉ်ကြိုးလေးဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဘယ်လောက်ခိုင်မြဲနေခဲ့ပြီသလဲဆို ဒီလိုစကားတွေအပြန်အလှန်ပြောဖြစ်ကြတဲ့အထိ ဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုက နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလာရင်တောင် ထပ်ဆုံတွေ့ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့အထိ , ထပ်ဆုံတွေ့ဖို့ စကားဆိုလာတဲ့အထိ သံယောဇဉ်တွေအတော်ခိုင်မြဲနေခဲ့ကြ~💖 ကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတာကို "ရေစက်" လို့သဘောထားပြီး နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလာရင်တောင် ထပ်ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်လို့ ပြောလာကိုကြည့်ရင် ကိုယ်တွေကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားလိုက်သလဲဆိုတာ သိပ်သိသာ~😭 အဲ့တာတွေကြောင့်လည်း တကယ်ပါ နောက်ထပ် တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလာရင်တောင် ကျယ်ပြောလှတဲ့ စကြ၀ဠာကြီးထဲ သူတို့နဲ့ ဆုံဖို့ "ရေစက်" ပါလာတဲ့ EXO-L ထပ်ဖြစ်ချင်မိပါသေးရဲ့~💘
ဒီ​နေ့ ment မှာ comeback အ​ကြောင်း​ပြောသွားတာ​လေးကို Mm sub ​လေးနဲ့ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~♡ Baekhyunee က ​နောက်​အပတ်​ , ​နောက်​အပတ်​ဆိုပြီး ဆက်​တိုက်​ စ​,နေ​တော့ Comeback က ဒီလ ​နောက်​ဆုံးအပတ်​ဖြစ်​ရင်​ဖြစ်​ , ဒါမှမဟုတ်​ August ပထမပတ်​ထဲ​လောက်​ဖြစ်​ဖို့ ​သေချာ​နေပါပြီ​နော်​။ JunMyeon ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း အ​ကောင်းဆုံး ကြိုးစားပြင်​ဆင်​ထားတာမို့ အများကြီး​မျှော်​လင့်​​ပေးကြပါလို့ဆိုလာတဲ့အတွက်​ ​ယော​ရောဘွန်းတို့​ရေ အသင့်​ပြင်​ပြီးသာ​စောင့်​​နေကြပါ​တော့~!!😭 Comeback မလုပ်​ရ​သေးခင်​မှာပဲ 2018 အ​စောပိုင်းမှာတင်​ သမိုင်းသစ်​​တွေ​ရေးထိုး​နေခဲ့တဲ့ ​​EXO အတွက်​ တကယ့်​ 2018 က မကြာခင်​မှာစတင်​ပါ​တော့မယ်​။ JunMyeon ​ပြော​နေတာကို ဟျွန်းနီးတစ်​​ယောက်​ "သိပါပြီ hyung" လို့ ၀င်​၀င်​​နောက်​ပုံ​လေးကလည်း အရမ်းချစ်​စရာ​ကောင်းလွန်းပါတယ်​။😙 ကြားရသ​လောက်​ အနီးစပ်​ဆုံး Sub ထိုး​ပေးထား​ပေမယ့်​ အမှားပါလာခဲ့သည်​ရှိ​သော်​ Admin ရဲ့ အမှားသာဖြစ်​ပါတယ်​​နော်​။🙏
 The ElyXiOn [dot] In Seoul D-1 : SUHO's Solo (Playboy) ♥ Outfit အသစ်​​လေးနဲ့ပိုပြီး ဆွဲ​ဆောင်​မှုရှိ​နေတဲ့ ElyXiOn [dot] In Seoul D-1 က JunMyeon ရဲ့ Playboy solo stage~!💙 Vid Cr:Amo_SuuH ​
안녕하세요~!!Twitter မှာ EXO-L တို့အတွက်​ special emoji ​လေး​တွေ​ပေါ်​နေပြီဆိုတာသိပြီးကြပြီလား!?? ဒီ​နေ့က EXO ရဲ့ Official Twitter @weareoneEXO account ကို ဖွင့်​ခဲ့တာ တစ်​နှစ်​ပြည့်​တဲ့​နေ့​လေးလည်းဖြစ်သလို ​EXO PLANET #4 -The ElyXion [dot] ကိုလည်း မကြာခင်​မှာကျင်းပပြုလုပ်​​တော့မှာဖြစ်​တဲ့အတွက်​ Twitter မှာ ဒီ​နေ့ကစပြီး Sep 30 ရက်​​နေ့အထိ EXO-L တို့အတွက်​ special emoji ​တွေ​ပေါ်​နေမှာဖြစ်​​ကြောင်း @weareoneEXO က ဒီ​နေ့ July လ9ရက်​​နေ့မှာပဲ ​ကြေညာခဲ့ပါတယ်​။ #EXO #weareoneEXO #EXOPLANET #TheElyXiOn_dot #EXO_ComingSoon စတဲ့ hashtag ​လေး​တွေကို ရိုက်​လိုက်​တာနဲ့ ​ဘေးမှာ အ၀ါ​ရောင်​ EXO Logo ​ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်​ပါတယ်​နော်​​။💕 #EXO_ComingSoon ဆို​တဲ့ hashtag ပါ​ ပါလာတော့ ​မကြာခင်​ comeback လာ​တော့မယ်​ဆိုတာ​သေချာသ​လောက်​ဖြစ်​​နေပါပြီ​နော်​။😭လာမယ့် July 13,14,15 ရက်ေ​​န့​တွေမှာ ပြုလုပ်မယ့် ​​ElyXiOn Dot မှာလည်း comeback နဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး ဘာ​တွေ​ပြောမလဲ ဘာ​တွေချပြလာမလဲ ဘယ်​လို surprise ​တွေလာမလဲဆိုတာအ​တော်​ကိုရင်​ခုန်​စရာကြီး​နော်​!!! ကဲ​လော​လောဆယ်​​တော့ Twitter မှာ hastag ​လေး​တွေနဲ့ Tweet ရင်း ​ပေါ်လာတဲ့ အ၀ါ​ရောင်​ EXO Logo ​လေး​တွေကိုကြည့်​ရင်း comeback ကို​စောင့်​ကြရ​အောင်​​နော်​~!!!တစ်​ကမ္ဘာလုံးက EXO-L ​တွေလည်း ဘယ်​​လောက်​စိတ်​လှုပ်​ရှား​နေလိုက်​သလဲဆို EXO-L ​တွေအတွက်​ Special Emoji Open ဆိုတာနဲ့ ၀ိုင်း Tweet လိုက်​ကြတာ #EXOPLANET က WorldWide Trending No.1 အထိ​​တောင်​ဖြစ်​သွားပါတယ်​​​။😍 📢Especially for EXO-L [EXO Official Twitter @weareoneEXO 1st Anniversary] & [EXO PLANET #4 -The ElyXiOn [dot]- ] Special emoji Open! 📆~ 2018.09.30. (KST) #EXO #weareoneEXO #EXOPLANET #TheElyXiOn_dot #EXO_ComingSoon
[Mm SUB] SUHO 리치맨(Rich Man) Ep.16 (ဇာတ်​သိမ်း) ~♡ မ​နေ့ညက ပြသ​ပြီးသွားတဲ့ JunMyeon ရဲ့ 리치맨(Rich Man) drama ဇာတ်​သိမ်းပိုင်း ကို Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​ချင်​သူ​တွေ Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆​ အပိုင်း (၁) ကစလို့ ဇာတ်​သိမ်းထိ JunMyeon ကိုချစ်​ခင်​​ပေးကြပြီး ကြည့်​ရှု့အား​ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ချင်းစီကိုလည်း ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​။ ******************************************* တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အ​အောင်မြင်ဆုံး IT Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​​​​​​Next In Company ရဲ့ စီအီးအို လီယူချန်းဆိုသူ ​အသက်​ 29 နှစ်​အရွယ်​​လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အ​အောင်​မြင်​ဆုံး IT Company ကို တည်​​ထောင်​ထားနိုင်​သူဖြစ်​ပြီး ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ Steve Jobs လို့​တောင်​ တင်​စားရ​လောက်​တဲ့အထိ ​အောင်​မြင်​​နေသူ လူငယ်​စီအီးအို​လေးတစ်​​ယောက်​ပါ။ ​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ​တော်​လွန်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ​တော်​ရုံလူဆိုရင်​ Next In ကို မှာအလုပ်​၀င်​ဖို့ မလွယ်​ကူပါဘူး။ ဒါ့​အပြင်​ အလုပ်​ရပြီးရင်​လည်း ဘယ်​​တော့ကိုယ်​ဟာ "Good Bye" ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်​ခံရရှိမလဲဆိုတာ ရင်​တမမနဲ့ ​စောင့်​​နေရတဲ့အထိ Next In မှာ အရည်​အချင်းပြည့်​မှီတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေကိုပဲ ခန့်​အပ်​ထားတာပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​လောကမှာအရာရာပြီးပြည့်​စုံ​နေတဲ့ သူဆိုတာ ရှားတယ်​ဆိုသလို ဒီလို​တော်​လွန်းသူ လီယူချန်းမှာလည်း လူ​တွေရဲ့မျက်​နှာကို မမှတ်​မိနိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးရှိလို့​နေပါတယ်​။ လီယူချန်းရဲ့ Next In Company ကို​ရောက်​ရှိလာသူ ကင်​ဘိုရာ ဆိုသူ ဂျယ်​ဂျူကျွန်းသူ​လေးက​တော့ အသက်​ 24 နှစ်​သာရှိ​သေး​ပေမယ့်​ သူမတူတဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ​​​​သွက်​လက်​တဲ့ အရည်​အချင်း​တွေရှိတဲ့ ​ကောင်​​မ​လေးဖြစ်​ပြီး အလုပ်​ကိုကြိုးစားရှာ​ဖွေ​နေသူ​လေးပါ။ သွက်​လက်​တက်​ကြွပြီး မှတ်​ဥာဏ်​အား​ကောင်းသူ​လေး ကင်​ဘိုရာနဲ့ ​တော်​ရုံလူဆို အထင်​မကြီးတတ်​တဲ့ လီယူချန်းတို့ကြား ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​လေး​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာမလဲ။ လီယူချန်းရဲ့ မျက်​နှာ​တွေကိုမမှတ်​နိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးက​ကော သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအရာ​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာ​စေမလဲ။ "RichMan" drama က​တော့ နာမည်​ကြီး Japanese drama "Rich Man , Poor Woman " ကို ပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ remake drama ​လေးဖြစ်​ပြီး Kim JunMyeon (EXO) နဲ့ Ha Yeon-soo တို့က အဓိက ဇာတ်​​ဆောင်​​တွေအ​နေနဲ့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။ 2nd lead ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ လီယူချန်းကို ဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့အပြင်​ ကင်​ဘိုရာအ​ပေါ်ကိုပါ ​ကောင်းတဲ့ Next In ရဲ့ ဒုသူ​ဌေး မင်​ထယ်​ဂျူ အဖြစ် ​Oh Chang-suk , လီယူချန်း​ကို စိတ်​၀င်​စား​နေသူဖြစ်​ပြီး လီယူချန်းနဲ့ သက်​တူရွယ်​တူ လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်​ ဒုသူ​ဌေး ​​​မင်​ထယ်​ဂျူ ရဲ့ ညီမလည်းဖြစ်​တဲ့ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ Kim Ye-won တို့ကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ အလုပ်​နဲ့အချစ်​ကြားက ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို ဟာသအပါအ၀င်​ ရသအစုံအလင်​နဲ့ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ~♡ ****리치맨(RichMan) မြန်​မာစာတန်းထိုး Link စုစည်းမှု**** Ep - 1 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643200869350112&id=257341654602704 Ep -2 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643338052669727&id=257341654602704 Ep -3>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646296292373903&id=257341654602704 Ep -4 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646842092319323&id=257341654602704 Ep -5>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649867778683421&id=257341654602704 Ep -6>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=650384535298412&id=257341654602704 Ep -7 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653589291644603&id=257341654602704 Ep -8 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=130107191198023&id=100025962285113 Ep -9>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=657338217936377&id=257341654602704 Ep - 10 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=658076947862504&id=257341654602704 Ep - 11>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=661981430805389&id=257341654602704 Ep - 12 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662727517397447&id=257341654602704 Ep - 13 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669299770073555&id=257341654602704 Ep - 14 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=670173133319552&id=257341654602704 Ep - 15 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=676496509353881&id=257341654602704 Video Cr:Gold Channel Movies
[Mm SUB] SUHO 리치맨(Rich Man) Ep.15 ~♡ ​နောက်​တစ်​ပိုင်းဆို ဇာတ်​သိမ်းပါပြီ​နော်​။ လတ်တေ​လာ ပြသ​နေတဲ့ JunMyeon ရဲ့ 리치맨(Rich Man) drama Ep.15 ကို Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​ချင်​သူ​တွေ Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆​ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အ​အောင်မြင်ဆုံး IT Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​​​​​​Next In Company ရဲ့ စီအီးအို လီယူချန်းဆိုသူ ​အသက်​ 29 နှစ်​အရွယ်​​လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အ​အောင်​မြင်​ဆုံး IT Company ကို တည်​​ထောင်​ထားနိုင်​သူဖြစ်​ပြီး ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ Steve Jobs လို့​တောင်​ တင်​စားရ​လောက်​တဲ့အထိ ​အောင်​မြင်​​နေသူ လူငယ်​စီအီးအို​လေးတစ်​​ယောက်​ပါ။ ​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ​တော်​လွန်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ​တော်​ရုံလူဆိုရင်​ Next In ကို မှာအလုပ်​၀င်​ဖို့ မလွယ်​ကူပါဘူး။ ဒါ့​အပြင်​ အလုပ်​ရပြီးရင်​လည်း ဘယ်​​တော့ကိုယ်​ဟာ "Good Bye" ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်​ခံရရှိမလဲဆိုတာ ရင်​တမမနဲ့ ​စောင့်​​နေရတဲ့အထိ Next In မှာ အရည်​အချင်းပြည့်​မှီတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေကိုပဲ ခန့်​အပ်​ထားတာပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​လောကမှာအရာရာပြီးပြည့်​စုံ​နေတဲ့ သူဆိုတာ ရှားတယ်​ဆိုသလို ဒီလို​တော်​လွန်းသူ လီယူချန်းမှာလည်း လူ​တွေရဲ့မျက်​နှာကို မမှတ်​မိနိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးရှိလို့​နေပါတယ်​။ လီယူချန်းရဲ့ Next In Company ကို​ရောက်​ရှိလာသူ ကင်​ဘိုရာ ဆိုသူ ဂျယ်​ဂျူကျွန်းသူ​လေးက​တော့ အသက်​ 24 နှစ်​သာရှိ​သေး​ပေမယ့်​ သူမတူတဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ​​​​သွက်​လက်​တဲ့ အရည်​အချင်း​တွေရှိတဲ့ ​ကောင်​​မ​လေးဖြစ်​ပြီး အလုပ်​ကိုကြိုးစားရှာ​ဖွေ​နေသူ​လေးပါ။ သွက်​လက်​တက်​ကြွပြီး မှတ်​ဥာဏ်​အား​ကောင်းသူ​လေး ကင်​ဘိုရာနဲ့ ​တော်​ရုံလူဆို အထင်​မကြီးတတ်​တဲ့ လီယူချန်းတို့ကြား ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​လေး​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာမလဲ။ လီယူချန်းရဲ့ မျက်​နှာ​တွေကိုမမှတ်​နိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးက​ကော သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအရာ​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာ​စေမလဲ။ "RichMan" drama က​တော့ နာမည်​ကြီး Japanese drama "Rich Man , Poor Woman " ကို ပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ remake drama ​လေးဖြစ်​ပြီး Kim JunMyeon (EXO) နဲ့ Ha Yeon-soo တို့က အဓိက ဇာတ်​​ဆောင်​​တွေအ​နေနဲ့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။ 2nd lead ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ လီယူချန်းကို ဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့အပြင်​ ကင်​ဘိုရာအ​ပေါ်ကိုပါ ​ကောင်းတဲ့ Next In ရဲ့ ဒုသူ​ဌေး မင်​ထယ်​ဂျူ အဖြစ် ​Oh Chang-suk , လီယူချန်း​ကို စိတ်​၀င်​စား​နေသူဖြစ်​ပြီး လီယူချန်းနဲ့ သက်​တူရွယ်​တူ လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်​ ဒုသူ​ဌေး ​​​မင်​ထယ်​ဂျူ ရဲ့ ညီမလည်းဖြစ်​တဲ့ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ Kim Ye-won တို့ကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ အလုပ်​နဲ့အချစ်​ကြားက ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို ဟာသအပါအ၀င်​ ရသအစုံအလင်​နဲ့ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ~♡ ****리치맨(RichMan) မြန်​မာစာတန်းထိုး Link စုစည်းမှု**** Ep - 1 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643200869350112&id=257341654602704 Ep -2 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643338052669727&id=257341654602704 Ep -3>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646296292373903&id=257341654602704 Ep -4 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646842092319323&id=257341654602704 Ep -5>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649867778683421&id=257341654602704 Ep -6>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=650384535298412&id=257341654602704 Ep -7 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653589291644603&id=257341654602704 Ep -8 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=130107191198023&id=100025962285113 Ep -9>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=657338217936377&id=257341654602704 Ep - 10 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=658076947862504&id=257341654602704 Ep - 11>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=661981430805389&id=257341654602704 Ep - 12 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662727517397447&id=257341654602704 Ep - 13 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669299770073555&id=257341654602704 Ep - 14 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=670173133319552&id=257341654602704 Video Cr:Gold Channel Movies
[Mm SUB] SUHO 리치맨(Rich Man) Ep.14 ~♡ လတ်တေ​လာ ပြသ​နေတဲ့ JunMyeon ရဲ့ 리치맨(Rich Man) drama Ep.14 ကို Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​ချင်​သူ​တွေ Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆​ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အ​အောင်မြင်ဆုံး IT Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​​​​​​Next In Company ရဲ့ စီအီးအို လီယူချန်းဆိုသူ ​အသက်​ 29 နှစ်​အရွယ်​​လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အ​အောင်​မြင်​ဆုံး IT Company ကို တည်​​ထောင်​ထားနိုင်​သူဖြစ်​ပြီး ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ Steve Jobs လို့​တောင်​ တင်​စားရ​လောက်​တဲ့အထိ ​အောင်​မြင်​​နေသူ လူငယ်​စီအီးအို​လေးတစ်​​ယောက်​ပါ။ ​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ​တော်​လွန်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ​တော်​ရုံလူဆိုရင်​ Next In ကို မှာအလုပ်​၀င်​ဖို့ မလွယ်​ကူပါဘူး။ ဒါ့​အပြင်​ အလုပ်​ရပြီးရင်​လည်း ဘယ်​​တော့ကိုယ်​ဟာ "Good Bye" ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်​ခံရရှိမလဲဆိုတာ ရင်​တမမနဲ့ ​စောင့်​​နေရတဲ့အထိ Next In မှာ အရည်​အချင်းပြည့်​မှီတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေကိုပဲ ခန့်​အပ်​ထားတာပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​လောကမှာအရာရာပြီးပြည့်​စုံ​နေတဲ့ သူဆိုတာ ရှားတယ်​ဆိုသလို ဒီလို​တော်​လွန်းသူ လီယူချန်းမှာလည်း လူ​တွေရဲ့မျက်​နှာကို မမှတ်​မိနိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးရှိလို့​နေပါတယ်​။ လီယူချန်းရဲ့ Next In Company ကို​ရောက်​ရှိလာသူ ကင်​ဘိုရာ ဆိုသူ ဂျယ်​ဂျူကျွန်းသူ​လေးက​တော့ အသက်​ 24 နှစ်​သာရှိ​သေး​ပေမယ့်​ သူမတူတဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ​​​​သွက်​လက်​တဲ့ အရည်​အချင်း​တွေရှိတဲ့ ​ကောင်​​မ​လေးဖြစ်​ပြီး အလုပ်​ကိုကြိုးစားရှာ​ဖွေ​နေသူ​လေးပါ။ သွက်​လက်​တက်​ကြွပြီး မှတ်​ဥာဏ်​အား​ကောင်းသူ​လေး ကင်​ဘိုရာနဲ့ ​တော်​ရုံလူဆို အထင်​မကြီးတတ်​တဲ့ လီယူချန်းတို့ကြား ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​လေး​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာမလဲ။ လီယူချန်းရဲ့ မျက်​နှာ​တွေကိုမမှတ်​နိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးက​ကော သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအရာ​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာ​စေမလဲ။ "RichMan" drama က​တော့ နာမည်​ကြီး Japanese drama "Rich Man , Poor Woman " ကို ပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ remake drama ​လေးဖြစ်​ပြီး Kim JunMyeon (EXO) နဲ့ Ha Yeon-soo တို့က အဓိက ဇာတ်​​ဆောင်​​တွေအ​နေနဲ့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။ 2nd lead ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ လီယူချန်းကို ဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့အပြင်​ ကင်​ဘိုရာအ​ပေါ်ကိုပါ ​ကောင်းတဲ့ Next In ရဲ့ ဒုသူ​ဌေး မင်​ထယ်​ဂျူ အဖြစ် ​Oh Chang-suk , လီယူချန်း​ကို စိတ်​၀င်​စား​နေသူဖြစ်​ပြီး လီယူချန်းနဲ့ သက်​တူရွယ်​တူ လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်​ ဒုသူ​ဌေး ​​​မင်​ထယ်​ဂျူ ရဲ့ ညီမလည်းဖြစ်​တဲ့ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ Kim Ye-won တို့ကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ အလုပ်​နဲ့အချစ်​ကြားက ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို ဟာသအပါအ၀င်​ ရသအစုံအလင်​နဲ့ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ~♡ ****리치맨(RichMan) မြန်​မာစာတန်းထိုး Link စုစည်းမှု**** Ep - 1 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643200869350112&id=257341654602704 Ep -2 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643338052669727&id=257341654602704 Ep -3>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646296292373903&id=257341654602704 Ep -4 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646842092319323&id=257341654602704 Ep -5>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649867778683421&id=257341654602704 Ep -6>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=650384535298412&id=257341654602704 Ep -7 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653589291644603&id=257341654602704 Ep -8 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=130107191198023&id=100025962285113 Ep -9>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=657338217936377&id=257341654602704 Ep - 10 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=658076947862504&id=257341654602704 Ep - 11>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=661981430805389&id=257341654602704 Ep - 12 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662727517397447&id=257341654602704 Ep - 13 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669299770073555&id=257341654602704 Video Cr:Gold Channel Movies
[Mm SUB] SUHO 리치맨(Rich Man) Ep.13 ~♡ လတ်တေ​လာ ပြသ​နေတဲ့ JunMyeon ရဲ့ 리치맨(Rich Man) drama Ep.13 ကို Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​ချင်​သူ​တွေ Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆​ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အ​အောင်မြင်ဆုံး IT Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​​​​​​Next In Company ရဲ့ စီအီးအို လီယူချန်းဆိုသူ ​အသက်​ 29 နှစ်​အရွယ်​​လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အ​အောင်​မြင်​ဆုံး IT Company ကို တည်​​ထောင်​ထားနိုင်​သူဖြစ်​ပြီး ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ Steve Jobs လို့​တောင်​ တင်​စားရ​လောက်​တဲ့အထိ ​အောင်​မြင်​​နေသူ လူငယ်​စီအီးအို​လေးတစ်​​ယောက်​ပါ။ ​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ​တော်​လွန်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ​တော်​ရုံလူဆိုရင်​ Next In ကို မှာအလုပ်​၀င်​ဖို့ မလွယ်​ကူပါဘူး။ ဒါ့​အပြင်​ အလုပ်​ရပြီးရင်​လည်း ဘယ်​​တော့ကိုယ်​ဟာ "Good Bye" ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်​ခံရရှိမလဲဆိုတာ ရင်​တမမနဲ့ ​စောင့်​​နေရတဲ့အထိ Next In မှာ အရည်​အချင်းပြည့်​မှီတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေကိုပဲ ခန့်​အပ်​ထားတာပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​လောကမှာအရာရာပြီးပြည့်​စုံ​နေတဲ့ သူဆိုတာ ရှားတယ်​ဆိုသလို ဒီလို​တော်​လွန်းသူ လီယူချန်းမှာလည်း လူ​တွေရဲ့မျက်​နှာကို မမှတ်​မိနိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးရှိလို့​နေပါတယ်​။ လီယူချန်းရဲ့ Next In Company ကို​ရောက်​ရှိလာသူ ကင်​ဘိုရာ ဆိုသူ ဂျယ်​ဂျူကျွန်းသူ​လေးက​တော့ အသက်​ 24 နှစ်​သာရှိ​သေး​ပေမယ့်​ သူမတူတဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ​​​​သွက်​လက်​တဲ့ အရည်​အချင်း​တွေရှိတဲ့ ​ကောင်​​မ​လေးဖြစ်​ပြီး အလုပ်​ကိုကြိုးစားရှာ​ဖွေ​နေသူ​လေးပါ။ သွက်​လက်​တက်​ကြွပြီး မှတ်​ဥာဏ်​အား​ကောင်းသူ​လေး ကင်​ဘိုရာနဲ့ ​တော်​ရုံလူဆို အထင်​မကြီးတတ်​တဲ့ လီယူချန်းတို့ကြား ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​လေး​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာမလဲ။ လီယူချန်းရဲ့ မျက်​နှာ​တွေကိုမမှတ်​နိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးက​ကော သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအရာ​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာ​စေမလဲ။ "RichMan" drama က​တော့ နာမည်​ကြီး Japanese drama "Rich Man , Poor Woman " ကို ပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ remake drama ​လေးဖြစ်​ပြီး Kim JunMyeon (EXO) နဲ့ Ha Yeon-soo တို့က အဓိက ဇာတ်​​ဆောင်​​တွေအ​နေနဲ့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။ 2nd lead ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ လီယူချန်းကို ဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့အပြင်​ ကင်​ဘိုရာအ​ပေါ်ကိုပါ ​ကောင်းတဲ့ Next In ရဲ့ ဒုသူ​ဌေး မင်​ထယ်​ဂျူ အဖြစ် ​Oh Chang-suk , လီယူချန်း​ကို စိတ်​၀င်​စား​နေသူဖြစ်​ပြီး လီယူချန်းနဲ့ သက်​တူရွယ်​တူ လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်​ ဒုသူ​ဌေး ​​​မင်​ထယ်​ဂျူ ရဲ့ ညီမလည်းဖြစ်​တဲ့ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ Kim Ye-won တို့ကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ အလုပ်​နဲ့အချစ်​ကြားက ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို ဟာသအပါအ၀င်​ ရသအစုံအလင်​နဲ့ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ~♡ ****리치맨(RichMan) မြန်​မာစာတန်းထိုး Link စုစည်းမှု**** Ep - 1 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643200869350112&id=257341654602704 Ep -2 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643338052669727&id=257341654602704 Ep -3>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646296292373903&id=257341654602704 Ep -4 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646842092319323&id=257341654602704 Ep -5>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649867778683421&id=257341654602704 Ep -6>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=650384535298412&id=257341654602704 Ep -7 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653589291644603&id=257341654602704 Ep -8 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=130107191198023&id=100025962285113 Ep -9>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=657338217936377&id=257341654602704 Ep - 10 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=658076947862504&id=257341654602704 Ep - 11>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=661981430805389&id=257341654602704 Ep - 12 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662727517397447&id=257341654602704 Video Cr:Gold Channel Movies
[Mm SUB] SUHO 리치맨(Rich Man) Ep.12 ~♡ လတ်တေ​လာ ပြသ​နေတဲ့ JunMyeon ရဲ့ 리치맨(Rich Man) drama Ep.12 ကို Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​ချင်​သူ​တွေ Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆​ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အ​အောင်မြင်ဆုံး IT Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​​​​​​Next In Company ရဲ့ စီအီးအို လီယူချန်းဆိုသူ ​အသက်​ 29 နှစ်​အရွယ်​​လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အ​အောင်​မြင်​ဆုံး IT Company ကို တည်​​ထောင်​ထားနိုင်​သူဖြစ်​ပြီး ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ Steve Jobs လို့​တောင်​ တင်​စားရ​လောက်​တဲ့အထိ ​အောင်​မြင်​​နေသူ လူငယ်​စီအီးအို​လေးတစ်​​ယောက်​ပါ။ ​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ​တော်​လွန်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ​တော်​ရုံလူဆိုရင်​ Next In ကို မှာအလုပ်​၀င်​ဖို့ မလွယ်​ကူပါဘူး။ ဒါ့​အပြင်​ အလုပ်​ရပြီးရင်​လည်း ဘယ်​​တော့ကိုယ်​ဟာ "Good Bye" ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်​ခံရရှိမလဲဆိုတာ ရင်​တမမနဲ့ ​စောင့်​​နေရတဲ့အထိ Next In မှာ အရည်​အချင်းပြည့်​မှီတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေကိုပဲ ခန့်​အပ်​ထားတာပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​လောကမှာအရာရာပြီးပြည့်​စုံ​နေတဲ့ သူဆိုတာ ရှားတယ်​ဆိုသလို ဒီလို​တော်​လွန်းသူ လီယူချန်းမှာလည်း လူ​တွေရဲ့မျက်​နှာကို မမှတ်​မိနိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးရှိလို့​နေပါတယ်​။ လီယူချန်းရဲ့ Next In Company ကို​ရောက်​ရှိလာသူ ကင်​ဘိုရာ ဆိုသူ ဂျယ်​ဂျူကျွန်းသူ​လေးက​တော့ အသက်​ 24 နှစ်​သာရှိ​သေး​ပေမယ့်​ သူမတူတဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ​​​​သွက်​လက်​တဲ့ အရည်​အချင်း​တွေရှိတဲ့ ​ကောင်​​မ​လေးဖြစ်​ပြီး အလုပ်​ကိုကြိုးစားရှာ​ဖွေ​နေသူ​လေးပါ။ သွက်​လက်​တက်​ကြွပြီး မှတ်​ဥာဏ်​အား​ကောင်းသူ​လေး ကင်​ဘိုရာနဲ့ ​တော်​ရုံလူဆို အထင်​မကြီးတတ်​တဲ့ လီယူချန်းတို့ကြား ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​လေး​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာမလဲ။ လီယူချန်းရဲ့ မျက်​နှာ​တွေကိုမမှတ်​နိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးက​ကော သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအရာ​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာ​စေမလဲ။ "RichMan" drama က​တော့ နာမည်​ကြီး Japanese drama "Rich Man , Poor Woman " ကို ပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ remake drama ​လေးဖြစ်​ပြီး Kim JunMyeon (EXO) နဲ့ Ha Yeon-soo တို့က အဓိက ဇာတ်​​ဆောင်​​တွေအ​နေနဲ့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။ 2nd lead ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ လီယူချန်းကို ဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့အပြင်​ ကင်​ဘိုရာအ​ပေါ်ကိုပါ ​ကောင်းတဲ့ Next In ရဲ့ ဒုသူ​ဌေး မင်​ထယ်​ဂျူ အဖြစ် ​Oh Chang-suk , လီယူချန်း​ကို စိတ်​၀င်​စား​နေသူဖြစ်​ပြီး လီယူချန်းနဲ့ သက်​တူရွယ်​တူ လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်​ ဒုသူ​ဌေး ​​​မင်​ထယ်​ဂျူ ရဲ့ ညီမလည်းဖြစ်​တဲ့ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ Kim Ye-won တို့ကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ အလုပ်​နဲ့အချစ်​ကြားက ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို ဟာသအပါအ၀င်​ ရသအစုံအလင်​နဲ့ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ~♡ ****리치맨(RichMan) မြန်​မာစာတန်းထိုး Link စုစည်းမှု**** Ep - 1 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643200869350112&id=257341654602704 Ep -2 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643338052669727&id=257341654602704 Ep -3>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646296292373903&id=257341654602704 Ep -4 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646842092319323&id=257341654602704 Ep -5>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649867778683421&id=257341654602704 Ep -6>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=650384535298412&id=257341654602704 Ep -7 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653589291644603&id=257341654602704 Ep -8 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=130107191198023&id=100025962285113 Ep -9>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=657338217936377&id=257341654602704 Ep - 10 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=658076947862504&id=257341654602704 Ep - 11>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=661981430805389&id=257341654602704 Video Cr:Gold Channel Movies
[Mm SUB] SUHO 리치맨(Rich Man) Ep.11 ~♡ လတ်တေ​လာ ပြသ​နေတဲ့ JunMyeon ရဲ့ 리치맨(Rich Man) drama Ep.11 ကို Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​ချင်​သူ​တွေ Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆​ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အ​အောင်မြင်ဆုံး IT Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​​​​​​Next In Company ရဲ့ စီအီးအို လီယူချန်းဆိုသူ ​အသက်​ 29 နှစ်​အရွယ်​​လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အ​အောင်​မြင်​ဆုံး IT Company ကို တည်​​ထောင်​ထားနိုင်​သူဖြစ်​ပြီး ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ Steve Jobs လို့​တောင်​ တင်​စားရ​လောက်​တဲ့အထိ ​အောင်​မြင်​​နေသူ လူငယ်​စီအီးအို​လေးတစ်​​ယောက်​ပါ။ ​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ​တော်​လွန်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ​တော်​ရုံလူဆိုရင်​ Next In ကို မှာအလုပ်​၀င်​ဖို့ မလွယ်​ကူပါဘူး။ ဒါ့​အပြင်​ အလုပ်​ရပြီးရင်​လည်း ဘယ်​​တော့ကိုယ်​ဟာ "Good Bye" ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်​ခံရရှိမလဲဆိုတာ ရင်​တမမနဲ့ ​စောင့်​​နေရတဲ့အထိ Next In မှာ အရည်​အချင်းပြည့်​မှီတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေကိုပဲ ခန့်​အပ်​ထားတာပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​လောကမှာအရာရာပြီးပြည့်​စုံ​နေတဲ့ သူဆိုတာ ရှားတယ်​ဆိုသလို ဒီလို​တော်​လွန်းသူ လီယူချန်းမှာလည်း လူ​တွေရဲ့မျက်​နှာကို မမှတ်​မိနိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးရှိလို့​နေပါတယ်​။ လီယူချန်းရဲ့ Next In Company ကို​ရောက်​ရှိလာသူ ကင်​ဘိုရာ ဆိုသူ ဂျယ်​ဂျူကျွန်းသူ​လေးက​တော့ အသက်​ 24 နှစ်​သာရှိ​သေး​ပေမယ့်​ သူမတူတဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ​​​​သွက်​လက်​တဲ့ အရည်​အချင်း​တွေရှိတဲ့ ​ကောင်​​မ​လေးဖြစ်​ပြီး အလုပ်​ကိုကြိုးစားရှာ​ဖွေ​နေသူ​လေးပါ။ သွက်​လက်​တက်​ကြွပြီး မှတ်​ဥာဏ်​အား​ကောင်းသူ​လေး ကင်​ဘိုရာနဲ့ ​တော်​ရုံလူဆို အထင်​မကြီးတတ်​တဲ့ လီယူချန်းတို့ကြား ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​လေး​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာမလဲ။ လီယူချန်းရဲ့ မျက်​နှာ​တွေကိုမမှတ်​နိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးက​ကော သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအရာ​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာ​စေမလဲ။ "RichMan" drama က​တော့ နာမည်​ကြီး Japanese drama "Rich Man , Poor Woman " ကို ပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ remake drama ​လေးဖြစ်​ပြီး Kim JunMyeon (EXO) နဲ့ Ha Yeon-soo တို့က အဓိက ဇာတ်​​ဆောင်​​တွေအ​နေနဲ့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။ 2nd lead ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ လီယူချန်းကို ဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့အပြင်​ ကင်​ဘိုရာအ​ပေါ်ကိုပါ ​ကောင်းတဲ့ Next In ရဲ့ ဒုသူ​ဌေး မင်​ထယ်​ဂျူ အဖြစ် ​Oh Chang-suk , လီယူချန်း​ကို စိတ်​၀င်​စား​နေသူဖြစ်​ပြီး လီယူချန်းနဲ့ သက်​တူရွယ်​တူ လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်​ ဒုသူ​ဌေး ​​​မင်​ထယ်​ဂျူ ရဲ့ ညီမလည်းဖြစ်​တဲ့ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ Kim Ye-won တို့ကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ အလုပ်​နဲ့အချစ်​ကြားက ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို ဟာသအပါအ၀င်​ ရသအစုံအလင်​နဲ့ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ~♡ ****리치맨(RichMan) မြန်​မာစာတန်းထိုး Link စုစည်းမှု**** Ep - 1 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643200869350112&id=257341654602704 Ep -2 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643338052669727&id=257341654602704 Ep -3>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646296292373903&id=257341654602704 Ep -4 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646842092319323&id=257341654602704 Ep -5>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649867778683421&id=257341654602704 Ep -6>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=650384535298412&id=257341654602704 Ep -7 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653589291644603&id=257341654602704 Ep -8 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2204363343127865&id=100006626612362 Ep -9>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=657338217936377&id=257341654602704 Ep - 10 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=658076947862504&id=257341654602704 Video Cr:Gold Channel Movies Download link: https://drive.google.com/file/d/1OdWm-0MC5ixHTvenS_BKZBaYqIPfPsYx/view
 weareone.exo Instagram Update FROM.SUHO ♥ [🎥: #KIMJUNMYEON #SUHO] ငါတို့ #EXO အငယ်​ဆုံး​လေး (Maknae) ဆယ်​ဟွန်း​နီး class!!👍 ချစ်​တယ်​​ကွာ ဆယ်​ဟွန်း​ရေ!!!!!❤ @oosehun #EXO [🎥: #KIMJUNMYEON #SUHO] 우리 #엑소 막내 세훈이 클라스!! 👍🏻 사랑한다 세훈아!!!!! ❤ @oohsehun #EXO အမ​လေး​လေး သူ့ညီ​ အငယ်​ဆုံး​လေးက ဒီ​နေ့ "RichMan" ရိုက်​ကွင်းကို food truck6စီး​တောင်​ ပို့​ပေးပြီး support ​ပေးခဲ့လို့ ​ပျော်​​နေတာ ​ပျော်​​နေတာ ကြည့်​ပါအုံး!!!💙 အာအီဂို~!!!ညီ​လေးက support ​ပေးလို့ ​ပျော်​​နေတဲ့ အစ်​ကိုကို​ကော သူ့အစ်​ကိုကို သတိတရ support ​ပေးတဲ့ ကိုယ်​တွေရဲ့​အငယ်​ဆုံး​လေးကို​ကော ချစ်​လိုက်​တာ​နော်​~!!!!😭 အထီးကျန်​နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ​​​Hyung ကို အမြဲတမ်း ​ပျော်​​အောင်​ထား​ပေးလို့​ကျေးဇူးပါ​ ဆယ်​ဟွန်း​လေး​ရေ~❤
[[Mm Sub]] မ​နေ့ညက JunMyeon က "RichMan" မှာ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ Kim Yewon ရဲ့ radio show ကို ရိုက်ကွင်းနဲ့နီးတာ​ကြောင့်ဆိုပြီး ​​​support တဲ့အ​နေနဲ့ surprise guest အ​ဖြစ်​သွား​ရောက်​ခဲ့ပါတယ်​။♥ Ratio Show မှာ JunMyeon က fan ​တွေ​မေးတဲ့​မေးခွန်းကို ပြန်​​ဖြေ​ပေးခဲ့တဲ့​နေရာမှာ EXO-L ​တွေ အားလုံးသိချင်​​နေကြတဲ့ ခုတ​လော အ​အေးမိတာ သက်​​သာသွားပြီလား? ဆိုတဲ့​မေးခွန်းကို ​ဖြေတဲ့အခါမှာ "အိပ်​မ​ပျော်​တာ​ကြောင့်​ တစ်​လထဲမှာပဲ နှစ်​ခါ​လောက်​ထိ​တောင်​ အ​အေးမိခဲ့ပါတယ်​" ဆိုတဲ့အ​ကြောင်း​ကို​ပြောပြခဲ့ပါတယ်​။နဂိုက ကျန်းမာ​ရေးကိုဂရုစိုက်​တတ်​သူဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ Gym ​သွားပြီး ​လေ့ကျင့်​ခန်းကို ပုံမှန်​လုပ်​တတ်​သူဖြစ်​​ပေမယ့်​ Schedule ​တွေအရမ်းများ​နေတဲ့အတွက်​ အလုပ်​ပင်​ပန်းတာ​ကော Gym သွားပြီး ​လေ့ကျင့်​ခန်း ပုံမှန်​မလုပ်​ဖြစ်​တဲ့အတွက်​​ကြောင့်​​ကော ခန္ဓာကိုယ်​က ​အားနည်းလာတဲ့အတွက်​ အ​အေးမိတဲ့အထိဖြစ်​ခဲ့ပုံပါပဲ။💔 ​နောက်​​မေးခွန်းကို​ဖြေတဲ့​နေရာမှာ​တော့ JunMyeon တစ်​​ယောက်​ခုတ​လော အရမ်းအထီးကျန်​​နေတယ်​ထင်​ပါရဲ့။ Kim Yewon က​တောင်​ JunMyeon က ဆက်​တိုက်​ကို အထီးကျန်​တယ်​ဆိုတဲ့ စကား​ပြောလွန်းလို့ ခုတ​လော အထီးကျန်​​နေသလား? လို့ ​မေးတဲ့အခါ JunMyeon က "drama ရိုက်​ကူး​ရေးလုပ်​ရင်း အရမ်းကို အထီးကျန်​ခဲ့သလိုပါပဲ" တဲ့ 💔 ပုံမှန်​အချိန်​​တွေမှာဆို ပိုပြီး​တော့​တောင်​ အထီးကျန်​ပါတယ်​လို့လဲ ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်​ 💔 Individual Schedule အ​​နေနဲ့ drama ရိုက်​ကူး​ရေး​​တွေ , movie ရိုက်​ကူး​ရေး​တွေ , musical အတွက်​ပြင်​ဆင်​တာ​တွေ collaboration အတွက်​ကြိုးပမ်းခဲ့ရတဲ့ အချိန်​​တွေက ခုတ​လော အရမ်းများလာ​တော့ အထီးကျန်​တဲ့အချိန်​​တွေဟာ အရမ်းကိုများလာတယ်​ထင်​ပါရဲ့။😞 ဒါ​လေးကို Mm Sub ထိုး​ပေးတာက ခုတ​လော JunMyeon ဟာ ဒီ​လောက်​ထိကို လူ​ကော စိတ်​​ကောပင်​ပန်း​နေရှာတယ်​ဆိုတဲ့အ​ကြောင်း​လေးသိ​စေချင်​လို့ပါ။တခြားထက်​ JunMyeon က ခုတ​လော သိသိသာသာ မျက်​နှာ​တွေ​ချောင်​ကျပြီး ​ချောင်း​တွေ​ရက်​ဆက်​လိုလိုဆိုး​နေခဲ့တာ​ကြောင့်​ အားလုံးက JunMyeon ရဲ့ ကျန်းမာ​ရေး အ​ခြေအ​နေကိုသိချင်​​နေကြမယ်​ထင်​လို့ပါ။​မေး​ပေးတဲ့ K fanကိုလည်း သိပ်​​ကျေးဇူးတင်​မိပါတယ်​။ Yewon ရဲ့ radio show ကတစ်​ဆင့်​ ခုတ​လော JunMyeon ဟာ လူပင်​ပန်း​နေတာတင်​မဟုတ်​ပဲ အထီးကျန်​စိတ်​​လေးပါခံစား​နေခဲ့ရတယ်​ဆိုတာလည်းသိခဲ့ရပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်လည်း ​​JunMyeon ​ဘေးမှာ သူ့အ​ပေါ် တကယ့်​ ညီအစ်​ကိုရင်းပမာ ချစ်​ခင်​​ပေးတဲ့ member ​တွေရှိ​နေတဲ့အတွက်​ နည်းနည်း​တော့စိတ်​သက်​သာရာရ​ပေမယ့်​ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို လူ​ကောစိတ်​​ကော အချိန်​​လေးနည်းနည်း​ပေးပြီး အနားယူလိုက်​ဖို့​တော့ ​မျှော်​လင့်​မိပါရဲ့။ ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ JunMyeon ရဲ့ ရိုက်​ကူး​ရေးပြီးတာ​တောင်​ တန်းပြီး အနားမယူ​ပဲ လုပ်​​ဖော်​ကိုင်​ဖက်​ဆီကို ရ​အောင်​သွား support ​ပေးခဲ့တဲ့ စိ​တ်​ထား​လေးက​တော့ အမြဲ ​လေးစားစရာ​ကောင်းလွန်းပါတယ်​။💙 ကြားရသ​လောက်​အနီးစပ်​ဆုံးနဲ့ ဆီ​လျော်​​အောင်​ ဘာသာပြန်​ထား​ပေမယ့်​ ဘာသာပြန်​တဲ့​နေရာမှာ အမှားပါခဲ့သည်​ရှိ​သော်​ ဘာသာပြန်​သူ Admin ရဲ့ အမှားသာဖြစ်​ပါတယ်​​နော်​။🙏
[Mm SUB] SUHO 리치맨(Rich Man) Ep.10 ~♡ လတ်တေ​လာ ပြသ​နေတဲ့ JunMyeon ရဲ့ 리치맨(Rich Man) drama Ep.10 ကို Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​ချင်​သူ​တွေ Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆​ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အ​အောင်မြင်ဆုံး IT Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​​​​​​Next In Company ရဲ့ စီအီးအို လီယူချန်းဆိုသူ ​အသက်​ 29 နှစ်​အရွယ်​​လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အ​အောင်​မြင်​ဆုံး IT Company ကို တည်​​ထောင်​ထားနိုင်​သူဖြစ်​ပြီး ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ Steve Jobs လို့​တောင်​ တင်​စားရ​လောက်​တဲ့အထိ ​အောင်​မြင်​​နေသူ လူငယ်​စီအီးအို​လေးတစ်​​ယောက်​ပါ။ ​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ​တော်​လွန်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ​တော်​ရုံလူဆိုရင်​ Next In ကို မှာအလုပ်​၀င်​ဖို့ မလွယ်​ကူပါဘူး။ ဒါ့​အပြင်​ အလုပ်​ရပြီးရင်​လည်း ဘယ်​​တော့ကိုယ်​ဟာ "Good Bye" ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်​ခံရရှိမလဲဆိုတာ ရင်​တမမနဲ့ ​စောင့်​​နေရတဲ့အထိ Next In မှာ အရည်​အချင်းပြည့်​မှီတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေကိုပဲ ခန့်​အပ်​ထားတာပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​လောကမှာအရာရာပြီးပြည့်​စုံ​နေတဲ့ သူဆိုတာ ရှားတယ်​ဆိုသလို ဒီလို​တော်​လွန်းသူ လီယူချန်းမှာလည်း လူ​တွေရဲ့မျက်​နှာကို မမှတ်​မိနိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးရှိလို့​နေပါတယ်​။ လီယူချန်းရဲ့ Next In Company ကို​ရောက်​ရှိလာသူ ကင်​ဘိုရာ ဆိုသူ ဂျယ်​ဂျူကျွန်းသူ​လေးက​တော့ အသက်​ 24 နှစ်​သာရှိ​သေး​ပေမယ့်​ သူမတူတဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ​​​​သွက်​လက်​တဲ့ အရည်​အချင်း​တွေရှိတဲ့ ​ကောင်​​မ​လေးဖြစ်​ပြီး အလုပ်​ကိုကြိုးစားရှာ​ဖွေ​နေသူ​လေးပါ။ သွက်​လက်​တက်​ကြွပြီး မှတ်​ဥာဏ်​အား​ကောင်းသူ​လေး ကင်​ဘိုရာနဲ့ ​တော်​ရုံလူဆို အထင်​မကြီးတတ်​တဲ့ လီယူချန်းတို့ကြား ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​လေး​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာမလဲ။ လီယူချန်းရဲ့ မျက်​နှာ​တွေကိုမမှတ်​နိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးက​ကော သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအရာ​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာ​စေမလဲ။ "RichMan" drama က​တော့ နာမည်​ကြီး Japanese drama "Rich Man , Poor Woman " ကို ပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ remake drama ​လေးဖြစ်​ပြီး Kim JunMyeon (EXO) နဲ့ Ha Yeon-soo တို့က အဓိက ဇာတ်​​ဆောင်​​တွေအ​နေနဲ့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။ 2nd lead ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ လီယူချန်းကို ဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့အပြင်​ ကင်​ဘိုရာအ​ပေါ်ကိုပါ ​ကောင်းတဲ့ Next In ရဲ့ ဒုသူ​ဌေး မင်​ထယ်​ဂျူ အဖြစ် ​Oh Chang-suk , လီယူချန်း​ကို စိတ်​၀င်​စား​နေသူဖြစ်​ပြီး လီယူချန်းနဲ့ သက်​တူရွယ်​တူ လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်​ ဒုသူ​ဌေး ​​​မင်​ထယ်​ဂျူ ရဲ့ ညီမလည်းဖြစ်​တဲ့ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ Kim Ye-won တို့ကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ အလုပ်​နဲ့အချစ်​ကြားက ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို ဟာသအပါအ၀င်​ ရသအစုံအလင်​နဲ့ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ~♡ ****리치맨(RichMan) မြန်​မာစာတန်းထိုး Link စုစည်းမှု**** Ep - 1 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643200869350112&id=257341654602704 Ep -2 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643338052669727&id=257341654602704 Ep -3>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646296292373903&id=257341654602704 Ep -4 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646842092319323&id=257341654602704 Ep -5>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649867778683421&id=257341654602704 Ep -6>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=650384535298412&id=257341654602704 Ep -7 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653589291644603&id=257341654602704 Ep -8 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2204363343127865&id=100006626612362 Ep -9>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=657338217936377&id=257341654602704 Video Cr:Gold Channel Movies Download link: http://www.goldchannelmovie.net/tvshows/%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8/
[Mm SUB] SUHO 리치맨(Rich Man) Ep.9 ~♡ လတ်တေ​လာ ပြသ​နေတဲ့ JunMyeon ရဲ့ 리치맨(Rich Man) drama Ep.9 ကို Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​ချင်​သူ​တွေ Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆​ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အ​အောင်မြင်ဆုံး IT Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​​​​​​Next In Company ရဲ့ စီအီးအို လီယူချန်းဆိုသူ ​အသက်​ 29 နှစ်​အရွယ်​​လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အ​အောင်​မြင်​ဆုံး IT Company ကို တည်​​ထောင်​ထားနိုင်​သူဖြစ်​ပြီး ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ Steve Jobs လို့​တောင်​ တင်​စားရ​လောက်​တဲ့အထိ ​အောင်​မြင်​​နေသူ လူငယ်​စီအီးအို​လေးတစ်​​ယောက်​ပါ။ ​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ​တော်​လွန်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ​တော်​ရုံလူဆိုရင်​ Next In ကို မှာအလုပ်​၀င်​ဖို့ မလွယ်​ကူပါဘူး။ ဒါ့​အပြင်​ အလုပ်​ရပြီးရင်​လည်း ဘယ်​​တော့ကိုယ်​ဟာ "Good Bye" ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်​ခံရရှိမလဲဆိုတာ ရင်​တမမနဲ့ ​စောင့်​​နေရတဲ့အထိ Next In မှာ အရည်​အချင်းပြည့်​မှီတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေကိုပဲ ခန့်​အပ်​ထားတာပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​လောကမှာအရာရာပြီးပြည့်​စုံ​နေတဲ့ သူဆိုတာ ရှားတယ်​ဆိုသလို ဒီလို​တော်​လွန်းသူ လီယူချန်းမှာလည်း လူ​တွေရဲ့မျက်​နှာကို မမှတ်​မိနိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးရှိလို့​နေပါတယ်​။ လီယူချန်းရဲ့ Next In Company ကို​ရောက်​ရှိလာသူ ကင်​ဘိုရာ ဆိုသူ ဂျယ်​ဂျူကျွန်းသူ​လေးက​တော့ အသက်​ 24 နှစ်​သာရှိ​သေး​ပေမယ့်​ သူမတူတဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ​​​​သွက်​လက်​တဲ့ အရည်​အချင်း​တွေရှိတဲ့ ​ကောင်​​မ​လေးဖြစ်​ပြီး အလုပ်​ကိုကြိုးစားရှာ​ဖွေ​နေသူ​လေးပါ။ သွက်​လက်​တက်​ကြွပြီး မှတ်​ဥာဏ်​အား​ကောင်းသူ​လေး ကင်​ဘိုရာနဲ့ ​တော်​ရုံလူဆို အထင်​မကြီးတတ်​တဲ့ လီယူချန်းတို့ကြား ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​လေး​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာမလဲ။ လီယူချန်းရဲ့ မျက်​နှာ​တွေကိုမမှတ်​နိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးက​ကော သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအရာ​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာ​စေမလဲ။ "RichMan" drama က​တော့ နာမည်​ကြီး Japanese drama "Rich Man , Poor Woman " ကို ပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ remake drama ​လေးဖြစ်​ပြီး Kim JunMyeon (EXO) နဲ့ Ha Yeon-soo တို့က အဓိက ဇာတ်​​ဆောင်​​တွေအ​နေနဲ့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။ 2nd lead ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ လီယူချန်းကို ဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့အပြင်​ ကင်​ဘိုရာအ​ပေါ်ကိုပါ ​ကောင်းတဲ့ Next In ရဲ့ ဒုသူ​ဌေး မင်​ထယ်​ဂျူ အဖြစ် ​Oh Chang-suk , လီယူချန်း​ကို စိတ်​၀င်​စား​နေသူဖြစ်​ပြီး လီယူချန်းနဲ့ သက်​တူရွယ်​တူ လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်​ ဒုသူ​ဌေး ​​​မင်​ထယ်​ဂျူ ရဲ့ ညီမလည်းဖြစ်​တဲ့ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ Kim Ye-won တို့ကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ အလုပ်​နဲ့အချစ်​ကြားက ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို ဟာသအပါအ၀င်​ ရသအစုံအလင်​နဲ့ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ~♡ ****리치맨(RichMan) မြန်​မာစာတန်းထိုး Link စုစည်းမှု**** Ep - 1 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643200869350112&id=257341654602704 Ep -2 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643338052669727&id=257341654602704 Ep -3>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646296292373903&id=257341654602704 Ep -4 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646842092319323&id=257341654602704 Ep -5>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649867778683421&id=257341654602704 Ep -6>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=650384535298412&id=257341654602704 Ep -7 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653589291644603&id=257341654602704 Ep -8 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2204363343127865&id=100006626612362 Video Cr:Channel Myanmar Download link:http://channelmyanmar.org/tvshows/rich-man-2018-tv-seriess/
[Mm SUB] SUHO 리치맨(Rich Man) Ep.7 ~♡ လတ်တေ​လာ ပြသ​နေတဲ့ JunMyeon ရဲ့ 리치맨(Rich Man) drama Ep.7 ကို Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​ချင်​သူ​တွေ Mm Sub ​လေးနဲ့ ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​~🙆​ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အ​အောင်မြင်ဆုံး IT Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​​​​​​Next In Company ရဲ့ စီအီးအို လီယူချန်းဆိုသူ ​အသက်​ 29 နှစ်​အရွယ်​​လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အ​အောင်​မြင်​ဆုံး IT Company ကို တည်​​ထောင်​ထားနိုင်​သူဖြစ်​ပြီး ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ Steve Jobs လို့​တောင်​ တင်​စားရ​လောက်​တဲ့အထိ ​အောင်​မြင်​​နေသူ လူငယ်​စီအီးအို​လေးတစ်​​ယောက်​ပါ။ ​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ​တော်​လွန်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ​တော်​ရုံလူဆိုရင်​ Next In ကို မှာအလုပ်​၀င်​ဖို့ မလွယ်​ကူပါဘူး။ ဒါ့​အပြင်​ အလုပ်​ရပြီးရင်​လည်း ဘယ်​​တော့ကိုယ်​ဟာ "Good Bye" ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်​ခံရရှိမလဲဆိုတာ ရင်​တမမနဲ့ ​စောင့်​​နေရတဲ့အထိ Next In မှာ အရည်​အချင်းပြည့်​မှီတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေကိုပဲ ခန့်​အပ်​ထားတာပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​လောကမှာအရာရာပြီးပြည့်​စုံ​နေတဲ့ သူဆိုတာ ရှားတယ်​ဆိုသလို ဒီလို​တော်​လွန်းသူ လီယူချန်းမှာလည်း လူ​တွေရဲ့မျက်​နှာကို မမှတ်​မိနိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးရှိလို့​နေပါတယ်​။ လီယူချန်းရဲ့ Next In Company ကို​ရောက်​ရှိလာသူ ကင်​ဘိုရာ ဆိုသူ ဂျယ်​ဂျူကျွန်းသူ​လေးက​တော့ အသက်​ 24 နှစ်​သာရှိ​သေး​ပေမယ့်​ သူမတူတဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ​​​​သွက်​လက်​တဲ့ အရည်​အချင်း​တွေရှိတဲ့ ​ကောင်​​မ​လေးဖြစ်​ပြီး အလုပ်​ကိုကြိုးစားရှာ​ဖွေ​နေသူ​လေးပါ။ သွက်​လက်​တက်​ကြွပြီး မှတ်​ဥာဏ်​အား​ကောင်းသူ​လေး ကင်​ဘိုရာနဲ့ ​တော်​ရုံလူဆို အထင်​မကြီးတတ်​တဲ့ လီယူချန်းတို့ကြား ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​လေး​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာမလဲ။ လီယူချန်းရဲ့ မျက်​နှာ​တွေကိုမမှတ်​နိုင်​တဲ့ အားနည်းချက်​​လေးက​ကော သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအရာ​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာ​စေမလဲ။ "RichMan" drama က​တော့ နာမည်​ကြီး Japanese drama "Rich Man , Poor Woman " ကို ပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ remake drama ​လေးဖြစ်​ပြီး Kim JunMyeon (EXO) နဲ့ Ha Yeon-soo တို့က အဓိက ဇာတ်​​ဆောင်​​တွေအ​နေနဲ့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။ 2nd lead ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ လီယူချန်းကို ဂရုစိုက်​တတ်​တဲ့အပြင်​ ကင်​ဘိုရာအ​ပေါ်ကိုပါ ​ကောင်းတဲ့ Next In ရဲ့ ဒုသူ​ဌေး မင်​ထယ်​ဂျူ အဖြစ် ​Oh Chang-suk , လီယူချန်း​ကို စိတ်​၀င်​စား​နေသူဖြစ်​ပြီး လီယူချန်းနဲ့ သက်​တူရွယ်​တူ လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်​ ဒုသူ​ဌေး ​​​မင်​ထယ်​ဂျူ ရဲ့ ညီမလည်းဖြစ်​တဲ့ မင်​ထယ်​ရာအဖြစ်​ Kim Ye-won တို့ကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ အလုပ်​နဲ့အချစ်​ကြားက ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ရိုမန်​တစ်​ဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို ဟာသအပါအ၀င်​ ရသအစုံအလင်​နဲ့ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ~♡ Ep - 1 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643200869350112&id=257341654602704 Ep -2 >>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643338052669727&id=257341654602704 Ep -3>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646296292373903&id=257341654602704 Ep -4 >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=646842092319323&id=257341654602704 Ep -5>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649867778683421&id=257341654602704 Ep -6>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=650384535298412&id=257341654602704 Video Cr:Gold Channel Movie Download link:http://www.goldchannelmovie.net/tvshows/rich-man-poor-woman/